Azimnikanga abekufuna izinkakha uMcCarthy - Impempe
Azimnikanga abekufuna izinkakha uMcCarthy
UTsepo Masilela waMaZulu FC emakene noMohammed Anas weBlack Leopards
Ufunde lukhulu ngabadlali bakhe abangalijwayele ijezi uBenni McCarthy oyinhloko yabaqeqeshi kuMaZulu awashiswe ijezi yiBlack Leopards kwiNedbank Cup ngoMgqibelo eThohoyandou Stadium, eLimpopo.
Usuthu obelusishintshe kakhulu isikimu esijwayelekile lukhale ngaphansi ngo 1-0 wegoli likaMohammed Anas alishaye esiwombeni sesibili.
Nakuba AmaZulu engeke esaqhubeka nalo mqhudelwano uMcCarthy abephupha ngokuwuwina kodwa lo mqeqeshi uthi izifundo azitholile ngabadlali bakhe abangalijwayele ijezi luzoba wusizo kakhulu kuyena kwiDStv Premiership.
Kubonakale nezihlabani zakudala zeKaizer Chiefs ezingoTsepo “Chester” Masilela, Siphiwe “Shabba” Tshabalala noLehlohonolo “Major” Majoro ziqala umdlalo ngemuva kwesikhathi eside lokhu kungenzeki.
“Akufanele ngibambelele kangako ekusoleni abadlali abaqale umdlalo namuhla yize kunezikhathi lapho bekucaca khona ukuthi ukube bekudlala laba abajwayele mhlawumbe bekuzokwenzeka okungcono.
“Uma usuhlale kakhulu ungadlali kuyinto ejwayelekile ukuthi ungabi sesimweni esikwenza ulungele noma yini eyenzeka emdlalweni. Ngeke ngibambele abadlali bami igqubu ekubeni isimo ngisiqonda kwamina.
“Sithole amathuba anele ikakhulukazi esiwombeni sokuqala (lapho ibhola likaMasilela abelingqofe ngemuva kokugotshelwa uTshabalala lishaye ipali laphuma ngaphandle). Kuliqiniso ukuthi ukube mhlawumbe nakhona bekudlala abanye besingakuthola okuthile.
“Kufanele siqhubeke bese sigxila ekutheni bakuphi bonke abanye abadlali (ngokulungela imidlalo) uma sibadinga nokuthi yini esizoyithola kubo ngaleso sikhathi.
“Ngiyazi manje ukuthi ubani engizombiza makwenzenjani ngoba sengibabonile bedlala. Ngineme ngengikubone namuhla ngoba vele ukukhala ngeNedbank ngeke kusisize ngalutho.
“Kukhona esikuzuzile yize umphumela ungazange ubemuhle. Kufanele sigxile ngokugcwele kwiligi manje ngoba iyona esisele nayo kodwa ngineme. Ngingakusho kugcwale umlomo lokho,” kusho uMcCarthy.
Previous Previous post: Iphoxwe seyithembile iMaritzburg ithola isibhaxu seBucs
Next Next post: U-Agay uveza iqiniso ngesimo esingesihle kwiChiefs